Shina RikoLite Slim Bar 320W 630W feno spectrum Greenhouse Lozan'ny famokarana sy orinasa | RIKO
RikoLite Slim Bar 320W 630W feno Spectrum Greenhouse Plant Light
SLIM BAR dia vahaolana jiro avo lenta marobe izay manome anao hery hifehezana ny fizaran-taona. Namboarina ho an'ny trano maintso sy ny fambolena an-trano anatiny ho an'ny famokarana mandritra ny taona, ny SLIM BAR Series dia manome hery ny mpamboly hanana vokatra azo trandrahana na dia misy aza ny vanim-potoana, mampitombo ny vokatra voa
SLIM BAR dia vahaolana jiro avo lenta marobe izay manome anao hery hifehezana ny fizaran-taona. Namboarina ho an'ny trano maintso sy ny fambolena an-trano anatiny ho an'ny famokarana mandritra ny taona, ny SLIM BAR Series dia manome hery ny mpamboly hanana vokatra azo trandrahana na dia eo aza ny vanim-potoana, mampitombo ny vokatra voajinja ary manatsara ny kalitao.
Ny SLIM BAR dia mampiasa spektrika feno fijerena namboarina haingana ho an'ny fitomboana haingana sy ny fampandrosoana tanteraka ny fambolena. Ampianarina amin'ny fambolena zavamaniry manomboka amin'ny famolavolana hatramin'ny lozisialy (ny fitomboana, ny fiakarana / ny fanapahana, ny reny, ny zavamaniry ary ny fambolena voninkazo) amin'ny tontolo anatiny. Miaraka amin'ny mari-pahaizana CRI amin'ny 85, SLIM BAR dia manolotra tontolo iainana tsara sy fikarohana miaraka amina loko marevaka ary mifanohitra lehibe kokoa handinihana ny fahasalaman'ny vokatrao.
MAMPIASA SY MANDROSO NY FOTOTRA MOMBA NY FIVORIANA REHETRA REHETRA
Ahitana fantsom-pahavitrihana haingam-pandeha avo lenta, ny SLIM BAR Series dia manolotra ny kalitao manome hatsaram-panahy hazavana vita amin'ny natiora raha manavotra ireo mpamboly dia kitapo amin'ny vidin'ny angovo. Afaka amin'ny alàlan'ny alokaloka amin'ny alàlan'ny voninkazo hamela ny zavamaniry hahazo ny tara-masoandro mandritra ny andro.
SLIM BAR dia manana soso-kevitra avo be recommended 18 ”(457 mm) eo ambonin'ilay kanopy zavamaniry misy fotsy sprazana fotsy ary mahomby tsara ny 2.6 µmol / W
Fametrahana mora foana
Ny SLIM BAR dia manana safidy samihafa amin'ny alàlan'ny fametrahana haingana ho an'ny fametrahana haingana sy mora.
Mety amin'ny famoahana mavo ao an-trano na amin'ny hazavana avo lenta miaraka amin'ny jiro amin'ny endrika mangatsiaka ary tsy misy aloky ny zavamaniry mandritra ny andro.
3 taona / 5 taona
Hihaona amin'ny fenitra ETL / CE / ROHS
Fonosana anaty boaty
22.55 x 3.89 x 3.18 santimetatra
663 x 159 x 144 mm / 1pcs / 1,7 kg
Ny SLIM BAR dia natao ho an'ny fanamboarana jiro sy ny hazavana anatiny anatiny. Manana tombony amin'ny faritra fanoherana ny hafanana lehibe, ny hazavana kely, ny fiarovana ny sokajy IP65 matihanina, tsy misy mpitia sy mora fametrahana sns.
Rafitra mangatsiaka tsara
Amin'ny fampiasana ny teknolojia faribolana, ny faritra hafanana hafanana dia 40% lehibe noho ny vokatra mitovy, ary ny maivana dia 60%. Ny endrika fanamboarana fantsom-bolan'ny telo dia mitondra fiantraikany amin'ny hafanana tsara.
Porofo sy harafesina amin'ny faharatsiana
Ny vatan'ny jiro dia vita amin'ny alàlan'ny AL1100 miaraka amin'ny dingana fanosotra vovoka mainty eny ambonin'ny tany. Vovon-tsolika PG9 varahina madio, 304 vy-vy vita amin'ny vy, vy miorina amin'ny heriny, tanjaka avo
Slim Bar dia manana safidy maro isan-karazany amin'ny fametrahana hardware, izay afaka apetraka haingana sy mora apetraka amin'ny habakao.
Previous: Panel Slim 35W
Manaraka: Ny fananganana tsiranoka sodium avo HPS 400W 600W 1000W Watt mitombo jiro mirehitra
Cmh mitombo jiro
Mitombo jiro mitombo
Hps mitombo jiro
Led Light mitombo
Rikolite nitondra hazavana mitombo
Multi-Bar Pro 660W / 1000W miforoa amin'ny jiro mitombo hazavana
Jiro fitomboan'ny fambolena, Jiro mitombo, Tariby hitondrana, Arotsaha fanaovan-jiro ho an'ny zavamaniry anatiny, Jiro anatiny, Uv Lamp For Plants,